Kutheni uLuz de Maria de Bonilla? -Ukubalwa ukuya eBukumkanini
Emva kweminyaka yokuyeka kwakhe ukuthanda kukaThixo, uLuz de María waqala ukuba neentlungu zomnqamlezo, aziphethe emzimbeni nasemphefumlweni. Oku kwenzeke okokuqala, wabelana, ngoLwesihlanu olungileyo: “INkosi yethu yandibuza ukuba ndifuna ukuthatha inxaxheba kwimbandezelo yakhe. Ndaphendula ngokuvuma, kwaye emva komhla wokuqhubeka komthandazo, ngobo busuku, uKrestu wabonakala kum emnqamlezweni kwaye wabelana ngenxeba lakhe. Yayibuhlungu into engachazeki, nangona ndiyazi ukuba nokuba kubuhlungu kangakanani na, ayisiyiyo intlungu akuyo uKristu uqhubeka ukubandezeleka ngenxa yoluntu. "
• I nangemvume yeCawa yamaKatolika, enikezwe nguBhishophu uJuan Abelardo Mata Guevara wase-Esteril ngo-2017 kwimibhalo kaLuz de Maria emva konyaka ka-2009, kunye nengxelo eqinisekisa inkolelo yakhe kwimvelaphi yabo ebalaseleyo.
Imiyalezo evela kuLuz de Maria de Bonilla
Luz – Ubuntu buza kubandezeleka
ilizwe elimelwe yibhere liya kusabela ngokungalindelekanga.
Luz-Guquka kwaye Uzingise elukholweni
Iintlekele zemvelo ziya kwanda amandla.
Luz – Zikhwebule Kwabo Benza izigwebo ngokungxama
Zila, thandaza, ucalula!
Luz-Amaxesha amabi kakhulu ayeza
Ububi bulawula ngokukhawuleza eluntwini.
Luz-Inkolo Entsha iyeza…
... idalwe ukuze uMchasi-Kristu anilawule.
ULuz – Abantwana abaneentliziyo ezilukhuni
Ufumana iziqhamo zokungathobeli malunga nesicelo sikaMama.
ULuz – Impambano yaMadoda
...iya kwenza abantwana bam banikezele kwimpambano yemfazwe.
... kunye nentlungu kaYesu.
Luz – Sizilile
...kuba yintoni eya kunwenwa kwihlabathi liphela.
Luz – Sukuphelelwa lithemba kwezona ndaba zincinci
Yiba nokholo olungagungqiyo.
Luz – Ubizo oluNgxamisekileyo oluya kuGuquko
Zondle ngoMzimba neGazi lonyana oNgcwele.
ILuzi – Uyigqithile iSodom neGomora
...unobangela wokwahlukana kweCawa.
Luz - Kuya kubakho iBhabheli
Ukubhideka kunye nesiphithiphithi ngenxa yokuchasa komntu uThixo.
Nika ingqalelo kwimiqondiso kunye nemiqondiso.
...yekile ngoku ukuba ngamahumhum.
Luz – Hloniphanani
Usuke waba ngumntu onobumnyama ekungekho ntembeko phakathi kwabo...
...ngenkululeko enkulu, enikwe luluntu ngokwalo.
Luz – Sabela kwiTyeya yosindiso
... ngokuchasene namagunya ezoqoqosho azimisele ukusasaza ukuphelelwa lithemba emhlabeni.
Luz – Uguqulo luyaqhuba
Ichaphazela umzuzu ngamnye.
Luz – Yiza Kulo Mama
Luz – Thambisa iingcango zakho
... kwaye uzinikele kwintando kaThixo.
Luz – Umhlaba Uya Kuqukuqela Ubisi Nobusi
... ngothando lukaBathathu Emnye.
Luz-Ixesha lokuzalisekiswa kweziprofetho eziKhulu
Isilumkiso siya kuba sesona senzo sikhulu senceba.
ILuzi - NjengeNqaba yaseBhabheli
Uluntu lubhidekile, lukhokelelwa ebukhobokeni.
Luz – Yiba lulwandiso lwentando kaThixo
Qhubeka usomoya ngakumbi.
Luz – Ndibize Imini nobusuku
ICawe ijonge kwiyantlukwano epheleleyo.
Luz – Indlala Igalelekile
Ndiyakubiza ukuba uqhubeke uthandaza iRosari eNgcwele kunye neChaplet.
I-Luz -Ingalo kaThixo ayinakubamba
... kodwa uya kubakhusela abantwana baKhe.
Luphakame lwathoba lwaza lwacinezela uluntu.
Luz de Maria-Kuya kufuneka ulwe ukugcina ukholo
Awunakutya? Ngaba indlala ifikile? Phethukela kulungiselelo lukaThixo.
Luz -Uya kubuyela ekuZiphiliseni ngokuPhila
Intshutshiso iqalile. . .
Luz-Eli xesha liBalulekileyo
Iziqalelo ziphakame ngokuchasene nomntu.
Luz -Ungxamiseko lobuhlobo obusondeleyo noYesu
Amaxesha anzima asondele kunokuba ucinga.
Guqula ube yintoni.
I-Luz-Ubunye buThintela ububi
Umanyene, uya koyisa.
Luz-Bhengeza ukholo lwakho kuThixo
Ukuhlanjululwa kobuntu kuyaqhubeka.
Bangaphi abalibeleyo ukusondela kwesilumkiso ...
Ubungendawo buhlala bukulandela ...
I-Luz-Ithemometha yoBomi bangaphakathi
Imisebenzi yakho kunye nokuziphatha kwakho.
Sijoyine ngoLwesibini, nge-15 kaJuni! I-Flame Flame yothando yeRosari.
USt Michael ubiza uSuku loMthandazo lweHlabathi
... kodwa ixesha lokucamngca.
ILuz-Ayisiyo Isiphelo seLizwe
Esi sizukulwana siyahlanjululwa.
I-Luz -iliXesha lokuThatha isigqibo soLuntu
Unyana wentshabalalo ulindele ukuvela.
Inguquko kufuneka yenzeke ngoku!
Luz - Isizukulwana soCoceko
Owona mqobo wakho mkhulu: ubumfama bokomoya.
ILuz-Isicwangciso sokuHambisa umhlaba
Isiphithiphithi siza ngokugula komzimba nomoya ...
ULuz - Ububi bukuphazamisile
... ekwenza woyike ukubhengeza ukuba uyiPropathi kaThixo!
... ukufuphi kunokuba ucinga.
Ngena kuthuleko lwangaphakathi.
Musa ukwenza izinto ngokungakhathali.
ILuzi-Xa iTywina leRhamncwa Liza
Ngubani oza kuthembeka kuNyana wam?
Luz de Maria-Ukuzibophelela okulingeneyo okusisiqingatha senhliziyo
Ukucoceka kwentliziyo kungxamisekile.
ILuz de Maria-Isibetho esitsha siza kuza
Ukubuyela kwesiqhelo ayisiyonyani yakho.
Ungxamile ukuya kumchasi-Kristu.
Luz de Maria-Ilanga liya kutshintsha
Ityeya sele yakhiwe.
ULuz de Maria-Ekulawuleni iingqondo
Itekhnoloji entsha echaphazela ingqondo ...
Luz de Maria-Usondele kakhulu kwiminyhadala
Le Lent iya kuphila ngokuhlanjululwa.
Luz de Maria -Icawa iya kugungqiswa
Sukoyika, gcina ukholo lwakho.
ULuz de Maria-Ndiya kulifutshane ixesha
Iintsuku ziya kukhawuleza; Kufuneka nizilungiselele.
Luz de Maria-Lungisa Amakhaya Akho
ILuz de Maria -Imbombo yeGunya leHlabathi
... ukulungiselela uluntu ngokuzithandela ukucela uphawu lwerhamncwa.
ILuz de Maria-Uvuno lusondela
... hayi umgwebo wokugqibela weZizwe, kodwa esi sizukulwana.
Luz de Maria -Ukuqhomfa isisu
Ngaba uziva ukuba inzaliseko yesiprofeto ikude?
Luz de Maria - Gcina Izibane Zakho Zitshisa
Ndikubiza ukuba ube yinxalenye yamaLalela aNgcwele.
ULuz de Maria-Ubuntu buya kujongana neentlekele
Esi sizukulwana siza kujongana neemvavanyo zokholo.
Luz de Maria - Amaxesha endlela yokuNqongophala
Zilungiseleleni ngokuwa koqoqosho
UYesu Krestu ucela ukuba le Tridum yehlabathi ibonelelwe nge-12 kaDisemba kwiNenekazi lethu laseGuadalupe
UYesu Kristu unqwenela ukungcwaliswa kwihlabathi liphela ngoDisemba 12 ...
Luz -Ukubiza ukuGuquka okungxamisekileyo
Okungakumbi ekuShukunyiseni okukhulu ...
Luz de Maria -Ukujijisa okukhulu
Ukunyikima okukhulu okuvezwe ngulo mama kuza ...
Luz de Maria - Imilambo yokungathobeli
... zikhokelela ubuntu kumchasi-Kristu.
ILuz-Iintlanga zilungiselela iMfazwe yesiThathu yeHlabathi
Ndize kukukhusela, kodwa kufuneka usuke ebubini.
Musa ukulinda imiqondiso — iphakathi kwakho.
Ububi bunwenwele phezu koluntu.
ILuz de Maria-Yenza uMbuyiselo namhlanje
Musa ukuhlala ungenzi nto.
Luz de Maria - Musa ukulinda
Intsalela yam eNgcwele iyanyulwa.
Luz de Maria -Ndilungiselela wena
... kwinto eme esangweni.
ULuz de Maria - Ukuhluza ingqolowa
ULuz de Maria-Umbono kunye nokuBonisa
Ubuntu, musa ukuba nenkani!
I-Luz de Maria-Ukucocwa koLuntu kuyakhawulezisa
Zilungiseleleni! Yintoni eya kwenzeka iya kunyamezeleka ngakumbi emntwini ukuba uhlala kuThixo ...
ULuz de Maria kwi-microchip ...
ILuz de Maria-Indalo ngokwayo iXhomekeke eMntwini
Ukuze loo mntu abuyele kuThixo amqonde.
U-Luz de Maria-Ubomi abusoze bufane kwakhona
Musa ukoyika: yonke iMikhosi yasezulwini ilindile
I-Luz de Maria-Ubuntu buyaqhubeka ngaphandle kokuqonda imiqondiso
Uthando lobathathu Emnye lubumba umcimbi omtsha
Luz de Maria-Ixesha li "ngoku"!
Lungiselela ukuShukumisa okuKhulu.
Luz de Maria-Thatha uxanduva ngeSono sakho
Kuya kufuneka nizibonele ngokwenu.
Luz de Maria - Musa Ukoyika, Nangona ububi buhleli
Andikuxeleli ngesiphelo sehlabathi, kodwa ukuhlanjululwa kwesi sizukulwana.
Luz de Maria - Yiba Luthando
Uthando lo nyana wam malwaziwe kubantwana bam bokwenyani.
Luz de Maria - Inkqubela phambili yobuKomanisi
Ukufuna isiphithiphithi emhlabeni wonke phantsi kwekhava yendlala.
ULuz de Maria - UMtyholi ungene kwiCawa
Uzifumana ngokwalo mzuzu uxelwe kwangaphambili: ukuzaliseka kwezityhilelo.
Luz de Maria - Hlala kwiZilumkiso zoMoya
Iindyikityha, iindyikityha zesifo noobhubhani, ezingapheleli ekuwongeni emzimbeni, kodwa nakomoya, aziyi kuyeka.
Luz de Maria -Uhlala ngaphakathi kwe-Countdown
... ukudibana kwakho nento endiyiprofetele uluntu.
U-Luz de Maria-Inyoka iyahambisa
Kuyimfuneko ukuba uMama wam amkelwe njengoMama woBuntu, uCoci-redemptrix kunye noMediatrix yazo zonke iintlobo.
Luz de Maria - UYesu Akasoze Akushiye
Abantu bakhe banjengezimvu ezingenamalusi.
ILuz de Maria-Intsholongwane sisiQalo kuphela
Abantu bakaThixo bazifumana eGetsemane.
INkosi yethu nge-13 kaJuni ka-2020: Bantu abathandekayo: Qhubeka kwindlela yenguquko. Hlala ngaphakathi kothando lwam, ...
ILuz de Maria-Indalo iphela kwi-Chaos
Ukunyamezela, ungathathi lula amazwi eZulu.
I-Luz de Maria-Izilingo aziyi kulibaziseka
Hlala uthembekile ngaphezu kwayo yonke enye into.
Luz de Maria-Impendulo
Ngaba "amagunya ezempilo angaphezulu koThixo"?
I-Luz de Maria-Madness yoLuntu iyaKhangela
Idabi likhokelela kwimfazwe yehlabathi.
Luz de Maria-Ziqonde Iimpawu Zamaxesha!
Yixhathise "imbonakalo yeengcinga" ...
Luz de Maria - Isilumkiso Sisondela
Thandazani, njengoko isenzo seNceba yam sisondele eluntwini ...
Luz de Maria -Hlala ukhuselekile entliziyweni yam
Ukuhlala ukhuselekile akuthethi ukukhululwa kwizinto eziza kuza, kodwa ujongane noxolo.
Luz de Maria - Ulawulo ngovalo
Isicwangciso seMeldic sicwangcisiwe ukwenzela ukuba silawule ubuntu ngenxa yokoyika.
Luz de Maria-Eli liXesha elingenaXesha
Eli lixesha asiloxesha ...
Ukudibanisa ukusuka kwiNkcubeko yamaRoma kwi-Exorcism Iintsikelelo zeTyuwa kunye naManzi
Imithandazo esesikweni yentsikelelo.
Ukulwa Neentsholongwane Nezifo…
Sisebenzisa indalo kaThixo ukomeleza ukhuseleko lwethu.
Iidiliya eziSikelelekileyo zamaxesha oNdlala
"Iziqhamo zazo zisetyenziselwa ukutya, kunye namagqabi azo kukuphilisa." (UHezekile 47:12)
Inenekazi lethu ukuya, nge-15 kaMatshi ka-2020: Bantwana abathandekayo beNtliziyo yam engaPhakamileyo: ndinisikelele ngalo mzuzu xa ubuntu ...
ILuz de Maria de Bonilla -IiVolcanoes Zihlambulule
ISt. Michael Ingelosi enkulu ku: Bantwana, uluntu luya kumangaliswa ngumsindo wentaba-mlilo engasaziwa nangoku. Umntu uza ku ...
← Kutheni uValeria Copponi?
Kutheni Simona noAngela? →